कलाकारलाई चुनौति दिने चराको यस्तो अभिनय ! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > कलाकारलाई चुनौति दिने चराको यस्तो अभिनय ! (भिडियो सहित)
कलाकारलाई चुनौति दिने चराको यस्तो अभिनय ! (भिडियो सहित)
admin August 29, 2020 भिडियो, रोचक	0
एजेन्सी । तपाइले सँसारभर सिनेमा वा टेलिभिजनमा विभिन्न कलाकारको अभिनय देख्नु भएको होला । ती अभिनयका कारण हामी रोमाञ्चित हुने गर्दछौ । तर के कुनै जनावरले अभिनय गर्न सक्ला ? भारतमा एक जीवले गरेको हर्कत कुनै सुपरस्टारको अभिनयभन्दा कम छैन । भारतमा अहिले एउटा भिडियो भाइरल बनेको छ । जसमा एक पक्षीले गरेको हर्कत नाम चलेका कलाकारको अभिनय पनि फिक्का लाग्दछ ।
भारती वन विभागका अधिकारी सुसान्त नन्दाले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको एक भिडियो भाइरल बनेको हो । हालै उनले २ जनावरको भिडियो अपलोड गरेकि थिइन् जसलाई हेर्दा चर्चित कार्टुन क्यारेक्टर टम एण्ड जेरीको स्मरण ताजा हुन्छ ।
भिडियोमा एक कुकुर जमिनमा रहेको पक्षीलाई खान खोजे झै गरेर हेर्छ । तर उक्त पक्षीले मरेको अभिनय यसरी गर्दछ कि मानौ उ कुनै पक्षी वा जीव नै होइन । यतिकैमा झुक्किएको कुकुर अचानक अन्यत्र हेर्दछ । तर कुकुरको ध्यान अन्यत्र मोडिएको फाइदा उठाउदैं उक्त पक्षीं त्यहाबाट रफूचक्कर हुन्छ । अर्थात भाग्दछ ।
समाचारकाे अन्य भिडियो हेर्न तलकाे लिङ्क क्लिक गर्नुहाेस्
इण्डियन चेलीको दादागिरी बढि भयो! कसैकाे धम्कीले डराउँदिन : गंगा चौधरी (भिडियो सहित)